ध्यानले व्यवस्थापकीय कुशलता दिन्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता ध्यानले व्यवस्थापकीय कुशलता दिन्छ
on: April 30, 2018 अन्तरवार्ता, मुख्य खबर
ध्यानले व्यवस्थापकीय कुशलता दिन्छ
गोरखाको उच्च पहाडी भेग नुब्री उपत्यकामा सन् १९७५ मा जन्मिएका योङ्गे मिङ्युर रिन्पोचे हाल ध्यानविधिका गुरुका रूपमा विश्वभर लोकप्रिय छन् । उनी बौद्ध दर्शनको तिब्बती परम्परागतअनुसार शिक्षा दिने गर्दछन् । उक्त शिक्षा दिने कार्यक्रमका लागि उनी वर्षको करीब ३ सय दिन यूरोप, अमेरिका र एशियाका विभिन्न देश पुग्छन् । उनको शिक्षामा यो मार्गमा हासिल गरेको व्यक्तिगत अनुभवका साथै वैज्ञानिक अनुसन्धानका नतीजासमेत समेटिएका छन् । प्रस्तुत छ, बुद्धको शिक्षालाई आधार बनाएर देशले ठूलो फड्को मार्न सक्ने दृष्टिकोण राख्ने उनै रिन्पोचेसँग आर्थिक अभियानका दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी :
बुद्धको शिक्षा के हो ?
बुद्धको शिक्षा हाम्रो अन्तर–संसारको व्याख्या हो । हामी सबैमा शीप, ज्ञान, करुणा, स्पष्टता र विशेषगरी सचेतना हुन्छ । तर, कसैले पनि यी महान् क्षमतालाई चिनेको हुँदैन, जसलाई बुद्धले ‘अज्ञान’ भन्नुभएको छ । हाम्रो मन जहिल्यै बाहिरतर्फ लक्षित हुन्छ । त्यसैले, यो विषय र वस्तुमा विभाजित सही र गलतको साँघुरो घेराभित्र रुमल्लिइरहन्छ । यही नै संसार अर्थात् कहिल्यै नसकिने पीडाको चक्र हो । हामी आफूलाई आफ्नै पिँजडामा कैद गरिरहेका हुन्छौं । उक्त पिँजडाबाट मुक्त हुन र आफ्नो वास्तविक स्वभाव पहिचान गर्न अन्तरमुखी (आफूभित्र हेर्ने) हुनुपर्छ । बुद्धका अनुसार हाम्रो वास्तविक स्वभाव बुद्धत्व हो । त्यसैले, एकपटक साथीभाइ, परिवार, समाज र बाँकी विश्वबाट अलग भएर आफू जो हो, त्यससँग जोडिन खोज्नुपर्छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ । यस अर्थमा बुद्धको मूल शिक्षा भनेकै हामी को हौं पत्ता लगाउनु हो ।
अनि तपाईंको शिक्षाचाहिँ के हो ?
मेरो शिक्षा चरणगत अभ्यासबाट शुरू हुन्छ । तिब्बतमा शिक्षण विधि, घरेलु विधि, ध्यानद्वारा अनुभव हासिल गर्ने विधिलगायत विभिन्न विधिको शिक्षालाई तिब्बती वंशपरम्परा (लिनेज)अनुसार पढाउने गरिन्छ । तीमध्ये मैले ध्यानद्वारा अनुभव हासिल गर्ने विधि छानेको छु । यो विधिमा शुरुआतमा जस्तो व्यक्ति भए पनि फरक पर्दैन । ध्यान गर्दै गएपछि अन्त्यमा सबैमा प्रेम र करुणाको उदय हुन्छ । मुख्य कुरा सचेतनासँग जोडिनु हो । म कुनै धर्म विशेषमा केन्द्रित नभई ध्यानको माध्यमबाट स्वयम्भित्रको स्वतन्त्रतामा लैजाने ‘जोय अफ लिभिङ’को अभ्यास गराउँछु ।
तपाईंको ध्यान साधनाको यात्रा कसरी शुरू भएको हो ?
म ७–८ वर्षको हुँदा, बेला बेलामा मलाई गहिरो छटपटीले समात्थ्यो । त्यो समस्याबाट छुटकारा पाउन मैले आफूलाई विभिन्न खेल, घुमफिर तथा सृजनात्मक काममा भुलाउन धेरै प्रयत्न गरेँ । तर, कसैगरी पनि समस्या समाधान भइरहेको थिएन । मेरा बुबा ‘टुल्कु उर्गेन रिम्पोचे’ एक ठूला ध्यान साधक हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले, कतै मेरो समस्याको समाधान ध्यानबाट पो हुन्छ कि भनेर उहाँलाई सोधौं जस्तो पनि नलागेको होइन । तर, तिमी अहिले सानै छौ, हुँदैन भन्नुहुन्छ कि भनेर सोध्न सकिनँ । आमालाई यो कुरा भनेको थिएँ । आमाले बुबालाई भन्नुभएछ । त्यसपछि म उहाँकै मार्ग निर्देशनमा रही ९ वर्षको उमेरदेखि ध्यानको अभ्यास गर्न थालेँ । ध्यानको अवधारणा राम्रो लागे पनि अभ्यास गर्नमा म अल्छी थिएँ । मेरो छटपटाहटको अन्त्य भइरहेको थिएन । त्यसैले, कडा अनुशासनमा बसेर साधना गर्दा पो हुन्छ कि भनेर १३ वर्षको हुँदा ३ वर्षको ध्यान शिविरका लागि भारत गएँ । ध्यान गर्न अल्छी लाग्ने स्वभावले त्यहाँ पनि पछ्याइरह्यो । साथै, छटपटी शुरू भएपछि म त्यसलाई दबाउने प्रयास गर्थें । यसरी पनि समस्या समाधान नभएपछि र मलाई जसरी पनि यो समस्याबाट निस्किनु नै छ भन्ने महसूस भएपछि मैले जे हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार्न थालेँ । त्यसपछि विस्तारै मेरो चरम छटपटी सदाका लागि अन्त्य भयो ।
यसको अर्थ त्यो छटपटी शारीरिक नभएर मानसिक थियो ?
खासगरी मानसिक नै हो । तर, मांसपेशी कस्सिएर आउने, मुटुको धड्कन बढ्ने, रिँगटा लाग्ने, चिटचिट पसिना आउनेजस्ता शारीरिक प्रभाव हुन्छन् । शरीरको कुनै आफ्नो वास्तविक समस्या हुँदैन, जति पनि सङ्केत देखिन्छन्, ती सबै मनकै प्रभाव हुन् । जब यस्तो छटपटी हुन्छ, मानिसहरू यसलाई हृदयाघातको समस्याका रूपमा बुझ्छन् र डाक्टरकहाँ जान्छन् । डाक्टरले जाँचेर केही समस्या छैन भन्यो भने उल्टै उक्त डक्टरको भनाइमा विश्वास नगरी दोस्रो तेस्रो डाक्टरकहाँ धाउँछन् । यस्तो समस्या हुने व्यक्तिले यसरी भौतारिनुको सट्टा आफ्नो मनको उपचार गर्ने हो भने समाधान पाउँछन् ।
यसको मतलव, हामी आफूभित्र जे भइरहेको छ, त्यो जान्दैनौं भन्ने हो ?
हो । मन प्रकाशजस्तै स्पष्ट छ । यसको गुण भनेको सचेतना हो । सचेतना स्वतन्त्र हुन्छ । यो रिस, डर, आशङ्का वा द्विविधाका कारण परिवर्तन हुँदैन । यो ऐनाका अगाडि परेका अँध्यारो, प्रकाश, रातो, कालो, नीलो वा अन्य रङका कारण ऐनाको रङ नै त्यस्तै देखिएजस्तो मात्रै हो । ऐना बाहिरको रङजस्तै देखिनु आफ्नो अगाडि परेको जे सुकैलाई पनि परावर्तन गर्न सक्ने यसको क्षमताको कारण मात्र हो । सचेतना पनि ऐना जस्तै हो । यसले संवेदनाहरूलाई परावर्तन गर्छ । तर, यो आफै संवेदना होइन । यसको ज्ञान नहुनाले हामी संवेदनाको वशमा पर्छौं र त्यहीअनुसारको आफ्नो धारणा बनाउँछौं ।
सचेतना र हाम्रो जीवनको बीचमा कहाँनेर अन्तराल छ ?
यसलाई उदाहरणको माध्यमबाट भनौं है ! हामी अफिस जाने बेला आज म एकदमै शान्त रहन्छु, कसैसँग रिसाउँदिनँ भन्ने सोचेर जान्छौं । तर, अफिस पुगेको केही समयभित्रै कुनै कुरा हामीले चाहेजस्तो नपाउनेबित्तिकै रिसाइहाल्छौं । हामी संवेदना र दृष्टिकोणको वशमा पर्नाले यस्तो हुन्छ । हामीलाई ऐनाजस्तै असली, स्पष्ट मनको स्थितिमा कसरी रहने भन्ने नै थाहा छैन । हामी प्रतिबिम्बको वशमा परेका छौं । त्यसैले, ध्यानको लक्ष्य हाम्रो मनको वास्तविक गुण, सच्चा स्वभाव, हाम्रो असली अवस्थामा फर्किनु हो । यसको मतलव संवेदनाशून्य हुनु होइन । बरु त्यसपछि झन् हाम्रो मन धेरै खुला तथा सफा हुन्छ । हामी आफ्नो सच्चा स्वभावसँग जोडिनासाथ पहिलेभन्दा पनि बढी संवेदनशील हुन्छौं । तर, त्यसको वशमा पर्दैनौं ।
यस अवस्थामा हालको समाज कुन स्थानमा छ ?
हाम्रो समाज भावनाद्वारा कैद छ । यो समाज वस्तुमा नभई त्यसको प्रतिबिम्बमा केन्द्रित छ । जस्तै– अहङ्कारी मन सधैं जित खोज्छ, पाउन खोज्छ । आजका मानिस भावनात्मक समस्याले जेलिएर तनावपूर्ण रहन्छन् । यस्ता अधिकांश समस्या यथार्थ नभई हाम्रो मनका उपज हुन् । यही मनसँग अभ्यस्त हामी अनन्त दुःख सृजना गरिरहेका हुन्छौं, दुःखको चक्र निरन्तर चलाइरहेका हुन्छौं ।
आक्कलझुक्कल सुखको अनुभूति गरी नै हाले पनि त्यो लामो समय रहँदैन । हाम्रो मनले अन्य स्थान, व्यक्ति वा वातावरणका रूपमा नयाँ कष्टको खोजी गरिरहेको हुन्छ । मन नै सबै कुराको आधार हो भन्ने हामीले बुझेका छैनौं । यो पैसा, शक्ति वा अन्य कुनै चीजले पनि परिवर्तन हुँदैन । मनलाई परिवर्तन गर्ने एउटै मात्र तरीका आन्तरिक रूपान्तरण हो ।
मानिसको जीवनमा पैसाको स्थान कस्तो हुनुपर्छ ?
पैसा स्वास्थ्य, आहार, आवास, समाज सेवाजस्ता धेरै काम गर्न नभईनहुने साधन हो । सही ढङ्गले उपयोग गर्ने हो भने यो मानव जातिका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण साधन पनि हो । हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने पैसा जीवन होइन, जीवनको एउटा अंश मात्र हो । यदि जीवनको लक्ष्य पैसा मात्र भइदियो भने जीवन खोक्रो बन्छ । त्यसैले, पैसालाई जीवनको साँचो अर्थ, स्पष्टता, सचेतना, प्रेम, करुणा र रचनात्मकता हासिल गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ ।
जीवन र पैसाबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
हामीले हृदयलाई सुन्यौं भने प्रेम, करुणा र विवेकको उचाइ बढ्दै जान्छ । प्रेम र करुणाले भरिएको विवेकी मान्छेप्रति अन्य वस्तुझैं पैसा पनि आकर्षित हुन्छ र त्यो दिगो पनि हुन्छ । पैसाको जीवन तथा उपलब्धि र खुशीसँगको सम्बन्ध पनि स्वस्थ र प्रभावकारी हुन्छ, यसले एक व्यक्तिलाई मात्र नभई सबैलाई फाइदा गर्छ ।
सचेतना र ध्यानको सन्दर्भमा कर्पोरेट क्षेत्र कहाँ पाउनुहुन्छ ?
कर्पोरेट क्षेत्रको उद्देश्य भनेकै नाफा र सफलता हो । उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छन् र त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति, संरचना र प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । बृहत् सोच तथा योजनाका लागि सचेतना, विवेक तथा कल्पनाशीलता अत्यन्त जरुरी तŒव हुन् । कुनै व्यवसाय शुरू गर्न वा बढाउन पनि योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस्ता योजनासँग पे्रम र करुणा पनि सम्बद्ध हुने हो भने झन् सफल हुन्छन् । किनकि उत्पादन जुन नै भए पनि यदि त्यसले सकारात्मक लाभ दिन्छ भने प्रयोगकर्ता त्यही उत्पादन सधैं प्रयोग गर्न लालायित हुन्छन् । यदि लाभ अस्थायी भएमा वा भावना नजोडिएमा प्रयोगकर्ताको हामीप्रतिको विश्वास हराउँछ ।
कर्पोरेट कल्चर स्वस्थ बनाइराख्न पनि प्रेम र करुणा अपरिहार्य तत्त्व हुन् । अन्यथा, यो अत्यधिक श्रेणी र शक्तिको असन्तुलनसहितको रोबोटिक कल्चर बन्दै जाने खतरा रहन्छ, जहाँ सञ्चार र सहकार्यको अभाव हुन्छ । यस्तो कम्पनी प्रायः केही समयपछि पतन हुने सम्भावना रहन्छ । सचेतनाले समस्यालाई त्यसको साँचो रूपमा हेर्ने क्षमताको विकास गर्छ भने पे्रम र करुणाले ती समस्या सहजै समाधान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । विवेकले दृष्टिकोणको स्पष्टता निखार्छ । ध्यानले व्यवस्थापकीय कुशलता ल्याउँछ । र, यी सबै चीजले मानिसलाई सफलताको बाटोमा डोहोर्‍याउँछन् ।
सचेतना र व्यवसायबीच कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ ?
मानिसलाई हरेक दिन विशेषगरी पेशा तथा व्यवसायमा प्रेरणा अत्यन्त जरुरी हुन्छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा पे्ररणा कायम राख्न प्रयासरत रहनुपर्छ । यदि हाम्रो जीवनको ध्येय परिवार, मित्र, समाज वा विश्वलाई मद्दत गर्नु हो भने त्यसले हामीलाई खुशी दिन्छ । पैसा कमाउने प्रक्रियाले पनि सन्तुष्टि दिन्छ, कडा मेहनत पनि रमाइलो लाग्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा जे काम पनि पवित्र भइदिन्छ । हरेक दिन उत्साहजनक र रचनात्मक हुन्छ । यसबाट नयाँपन, नयाँ विचार र नयाँ कुशलताको बीजारोपण हुन्छ । तपार्ईं समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, पैसा आफै आउँछ । स्टिभ जभ्स पैसाको बारेमा सोच्दैनन्, उनी बस् कसरी नयाँ टेक्नोलोजीसहितको विशेष कम्प्युटर बनाउने भन्ने सोच्छन् र आफ्ना नयाँ प्रविधि सबैसामु ल्याउँछन् । सफलताले उनलाई पछ्याउँछ ।
कर्पोरेट लीडरलाई कस्तो विधि सिकाउनुहुन्छ ?
म एशिया, यूरोप र अमेरिकाका कर्पोरेट क्षेत्रका फरक तह (व्यवस्थापक, सीईओ)लगायत व्यक्तिमाझ आफ्नो शिक्षा दिइरहेको हुन्छु । ती सबैको प्रमुख समस्या नै तनाव वा तनावसँग सम्बन्धित हुन्छन् । उनीहरू पैसा त धेरै कमाइरहेका छन् । तर, आफ्ना लागि समय नै छैन । लामो समयसम्म यही प्रक्रिया चलिरहँदा जीवन आफ्नो हातमा नभए जस्तो महसूस गर्छन् । यस क्षेत्रमा म प्रायः तनाव, एक्लोपन, द्विविधा, भावनात्मक असुरक्षाजस्ता मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका मानिस भेटिरहेको हुन्छु । यी समस्या यति गहिरिँदै गइरहेका छन्, ती व्यक्ति विनाऔषधि निदाउनै नसक्ने भइसके ।
उनीहरू जब ध्यान गर्न थाल्छन्, आफ्नो जीवन नै परिवर्तन भएको महसूस गर्छन् । उनीहरूमा बालसुलभ खुशी देखिन थाल्छ र उनीहरूको बदलिएको स्वभावले परिवार, साथीभाइ र सहकर्मीमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न थाल्छ । जब एउटा व्यवस्थापकीय पदमा रहेको व्यक्ति तनावमा हुन्छ, तब उसको बोली र व्यवहारले अन्य कर्मचारीलाई चोट पु¥याउँछ । त्यसको विपरीत जब ऊ खुशी रहन्छ, अन्य कर्मचारीले पनि काम गर्ने वातावरण सहज र उत्साहजनक भएको अनुभूति गर्छन् । यस्तो कार्यालयमा कर्मचारीले न्यानोपन अनुभव गर्नुका साथै उत्पादकत्व पनि बढ्छ ।
तपाईंका सिकाइ शिविरमा नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रका व्यक्ति कत्तिको सहभागी हुन्छन् ?
धेरै कम ।
यसो हुनुको कारण के होला ?
नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रले ध्यानको महत्त्वलाई अझै बुझिसकेको छैन । मानिस मन्त्र दोहोर्‍याउनु, धूप बाल्नु र पूजा गर्नुलाई ध्यान सम्झन्छन् । उनीहरू यी सबै चीज पनि नजानेर, नबुझेरै गरिरहेका हुन्छन् । अर्थ नबुझी गरिएको कुनै पनि कर्मले रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन । बरु यस्ता कामलाई हामीले भगवान्सँग माग्ने बाटो बनाएका छौं । तर, नेपालमा पनि ध्यानलाई बुझ्ने क्रमको शुरुआत भइसकेको छ, धेरै नेपाली साँच्चिकै ध्यानको महत्त्व बुझेर विभिन्न ध्यानको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रका मानिसका लागि तपाईंको सन्देश के छ ?
हामीसँग आध्यात्मिक वंशपरम्पराको महान् संस्कृति छ । विश्वभरबाट धेरै मानिस उक्त आध्यात्मिक सम्पदा हासिल गर्न आउँछन् । जे पाउन मानिस सात समुद्रपारबाट आउँछन्, त्यो यहीँ हामीसँगै छ । त्यसैले, यो अवसर नगुमाऊँ, आफ्नो अन्तःस्करणको गहिराइमा पुगी आफू को हूँ, चिनौं । आफूभित्रको वास्तविक क्षमता पहिचान गरिसकेपछि तपाईं अहिलेभन्दा पनि राम्रोसँग व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ ध्यानप्रतिको अवधारणा नै गलत छ । ध्यान ग¥यो भने कमजोर मुटुको भइन्छ, यसरी त बिजनेश कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ छ । यो क्षेत्रका व्यक्ति कठोर तथा झुठो बोल्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यी विषयले केही समयका लागि हैसियत निर्माण गर्न नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित मात्रै गर्छन् । यसबाट धेरै कुरा गुम्ने मात्रै नभई सफलता पनि दीर्घकालीन हुँदैन ।
ध्यान गर्न मानिसलाई केले प्रेरित गर्न सक्छ ?
यो मेरो वा ध्यान गर्नेहरू वा अध्यात्मको अभ्यास गर्नेहरूको मात्रै भनाइ होइन, जीवनका सफलता÷असफलता मान्छेको सोच्ने तरीकामा भर पर्छ भन्ने निष्कर्षमा वैज्ञानिकहरू पनि पुगिसकेका छन् । विश्व बैङ्कले मानिसको सोच्ने तरीका परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई सहयोग पु¥याउने योजना बनाइरहेको मेरा एक वैज्ञानिक साथी बताउँदै थिए । एकपटक सोच्ने तरीका बदल्ने हो भने त्यसपछि गरिने सारा कामको नतीजा नै परिवर्तन हुन्छ, असफल भइरहेको मानिस पनि सफल हुन थाल्छ ।
अहिले विश्वमा धेरै गुरुका साथै ध्यानका विधि पनि छन् । सही गुरु र विधि कसरी थाहा पाउने ?
मुख्य त त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता नै हो । मेरो विचारमा सच्चा गुरुमा चार विशेषता हुनुपर्छ– प्रामाणिक वंशपरम्परा, करुणा, विनम्रता र उक्त मार्गमा उसले अपनाएको अभ्यास, अध्ययन तथा ध्यानको अनुभव । यदि कुनै व्यक्तिले मसँग शक्ति, सिद्धि छ, जुन तिमीलाई दिन सक्छु भन्छ भने, ऊ सच्चा गुरु होइन ।
नेपालले ध्यानको माध्यमबाट कसरी लाभ लिन सक्छ ?
पछिल्लो समयमा पश्चिमी विश्वमा बुद्ध धर्म तथा ध्यान निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ । खोजीकर्ताहरू बुद्ध धर्मको उद्गमस्थलको खोजी गर्छन् । हामीसँग बुद्ध जन्मिएको भूमि छ । साथै, वंशपरम्परा हुँदै उहाँले सिकाएको अभ्यास विधि हामीकहाँ जीवित छ । मेरो अनुभवमा पनि हाम्रो देशमा बुद्धका ध्यान विधिहरू सिकाउने शिविर मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने पनि त्यसमा सहभागी हुन विश्वभरबाट मानिस ओइरिन्छन् ।